वाग्मती प्रदेशमा काँग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा | Ratopati
वाग्मती प्रदेशमा काँग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा
जुन पक्षसँग मिल्दा फाइदा हुन्छ त्यसैसँग मिल्ने
काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविस्वास प्रस्तावबारे छलफल गर्न बसेको नेपाली काँग्रेसका नेताहरुको बैठक ठोस निर्णयबिनै सकिएको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले जुन पक्षसँग मिल्दा पार्टीको हित हुन्छ त्यसैसँग मिल्ने तर अहिले नै यो पक्षलाई सघाउने भनेर निर्णय नभएको नेता डा. रामशरण महतले जानकारी दिए ।
नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावमा काँग्रेसको धारणा तय गर्न देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा नेताहरुबीच छलफल भएको थियो ।
नेता डा. रामशरण महतले रातोपाटीसँग भने, ‘सत्तारुढ दललबाटै अविस्वास प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा हामी सवै कुरा हेरेर निर्णय गर्छौ । त्यसमाथि विधि , पद्दति र प्रक्रियाको कुरा पनि हेर्छो ।’
उनले अविश्वास प्रस्ताव पहिला टेबल भएपछि त्यसबारेमा ठोस निर्णय हुने पनि बताए । ‘जे गर्दा पार्टीको हित हुन्छ त्यही गर्छौँ । हामी प्रतिपक्ष हौँ । यदि हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आए पछि हट्दैनौँ,’ बूढानीलकण्ठमा भएको छलफलपछि नेता महतले रातोपाटीसँग भने । शुक्रबार वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलविरुद्धको अविस्वास प्रस्ताव बैठकमा टेवल हुदैछ ।
१ सय १० सांसद रहेको यो प्रदेशमा सरकार जोगाउन र बनाउन ५६ जना सांसद आवश्यक पर्छ । नेकपा विभाजित भएको हालको अवस्थामा ओली पक्षसँग ३६ र प्रचण्ड–नेपालपक्षसँग ४४ सांसद रहेको बताइएको छ । पछिल्लो समय प्रचण्ड–नेपाल पक्षका तीन सांसद ओली पक्षतिर र ओली पक्षका एक सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहतिर लागेका अवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेललाई सरकार बचाउन थप २० सांसद आवश्यक पर्नेछ भने शाक्यलाई सरकार बनाउन १२ सांसद अपुग देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभामा २२ सांसद रहेको काँग्रेस निर्णायक हुने देखिन्छ ।
नेकपा विवादमा संसद सचिवालयले भन्यो- दल कानुननीरुपमा एउटै छ, सहजीकरणको भूमिका मात्रै निभाउन सकिन्छ
काँग्रेसको आजको नीति : केपी ओली र प्रचण्ड–नेपाललाई नियाल्ने रणनीति
९ सय देखि १० हजार रुपैयाँ मूल्य सम्ममा फिचर फोन बजारमा